सुदूरपश्चिममा अस्तित्व जोगाउन ओली पक्षले धमाधम पद बाँड्दै ! « Ok Janata Newsportal
सुदूरपश्चिममा अस्तित्व जोगाउन ओली पक्षले धमाधम पद बाँड्दै !
कैलाली । नेकपाको ओली पक्षले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो अवस्था कमजोर देखेपछि धमाधम पद बाड्ने नीति अख्तियार गरेको छ । तर, ती पद सिमिति समयका लागि मात्रै हुन् ।
मन्त्री हुन् या केन्द्रीय सदस्य, अहिले दाहाल–नेपाल पक्षमा नै नेकपाको पकड बलियो छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षको राजनीतिक अवस्था ओली पक्षको तुलनामा निकै बलियो देखिएको छ । त्यसैले पनि ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्य पद बाँडेर भए पनि यो प्रदेशमा आफ्नो संगठनको अस्तित्व बचाउने कसरत गर्न थालेको हो ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुँदा पूर्वमाओवादीले सुदूरपश्चिमबाट १४ जनालाई नेकपाको केन्द्रीय सदस्य बनाएको थियो ।
त्यस्तै चारवटा जिल्लामा अध्यक्ष र पाँच जिल्लामा सचिव पद पूर्व माओवादी पक्षले पाएको थियो । यस्तै पूर्वमाओवादीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा १४ जना निर्वाचित भएका थिए भने प्रतिनिधिसभामा तीन जना थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो पक्षले आफ्नो साखलाई कायमै राखेको छ ।
नेकपा विभाजनका बाबजुद प्रचण्ड–माधव पक्षमा सुदूरपश्चिमबाट १३ केन्द्रीय सदस्यको समर्थन छ । यो प्रदेशबाट प्रचण्ड–नेपाल पक्ष छाडेर कित्ता परिवर्तन गरी ओली पक्षमा लाग्ने सबैभन्दा प्रमुख नेतामा लेखराज भट्ट पर्दछन् ।
उनलाई संघीय सरकारमा मन्त्री र पार्टी कमिटीमा प्रदेश इन्चार्ज बनाउने प्रलोभनका साथ ओली पक्षले आफूतिर तानेको हो ।
पूर्वमाओवादीका १४ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये १२ जना प्रचण्ड–माधव पक्षमा छन् भने २ जना केपी गुटतिर गएका छन् ।
त्यसैगरी विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य ३ जनामध्ये विना मगर प्रचण्ड–माधव पक्षमा छिन् भने लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी केपी ओली पक्षतिर लागेका छन् ।
यस्तै, पूर्व एमालेका १०० जना प्रदेश कमिटी सदस्यमध्ये ५४ जना प्रचण्ड–माधब समूहमा छन् भने ४६ जना केपी गुटतिर छन् ।
५ जिल्ला अध्यक्षमध्ये ३ जना प्रचण्ड–माधव पक्षमा छन् भने २ जना केपी गुटतिर छन् । ४ जिल्ला सचिवमध्ये ३ जना प्रचण्ड–माधव पक्षमा छन् भने १ जना केपी गुटतिर छन् ।
सुदूरपश्चिममा संगठनात्मक रुपमा ७५ प्रतिशत प्रचण्ड–माधवतिर छन् भने २५ प्रतिशत केपी गुटतिर रहेको सुदूरपचिम प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार प्रदेश पदाधिकारी ६ जनामध्ये प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा मात्र केपी पक्षतिर छन् भने प्रदेश ईन्चार्ज भिम रावल सहित ५ जना प्रचण्ड–माधव पक्षमा छन् ।